« Izao no lazain’i Jehovah : mijanona eo an-dàlana hianareo, ka izahao, ary anontanio izay làlana masaka hatry ny ela. Dia i
zay làlana mankany amin’ny tsara, ka iny no izory, dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo hianareo, nefa hoy izy ; tsy hizotra izahay » Jer . 6 :16.
Rehefa avy mangataka amin’ny Tompo fahalalana ny sitrapony, fahendrena avy any ambony ary fahazavana avy amin’ny Fanahy Masina ny mpivavaka, dia handinika ny Soratra Masina izy, ary hahita fa ny toko sy andininy maizina tamin’ny sainy fahiny dia lasa mazava, ary ho fantany ny adidiny tsy toy ny tamin’ny lasa. Hoy Jesosy : « Tsy Ahy ny fampianarako, fa an’Izay naniraka ahy. Raha misy olona te-hanao ny sitrapony, dia hahalala ny amin’ny fampianarana izy, na avy amin’Andriamanitra izany, na miteny ho Ahy Aho » Jao. 7:16,17
Ny fahalalana ny fahamarinanan’Andriamanitra dia ampanantenaina ho an’ireo izay hilefitra amin’ny fankatoavana ny fahazavana sy fahamarinana izay nomena azy ireo. Ny fidirana amin’ny vavahady ety dia tsy miankina amin’ny fianarana na harena, fa miankina amin’ny fananana saina mora anarina. Izay manaiky ny tara-pahazavana voalohany avy amin’ny fahazavan’ny lanitra ary manaraka sy mandeha araka izany, ka mampifanaraka ny asany amin’izany tara-pahazavana izany ary lasa nohamasinin’izany, dia mbola handray fahazavana misimisy kokoa. Hahafantatra izy fa ny filazantsara dia drafi-pamonjena (...).
Izay manana fo mankato ka vonona hanao ny sitrapon’Andriamanitra, dia tsy handray amim-pifaliana ny fahamarinana fotsiny, fa hikatsaka amim-pahatokiana ny fahamarinana ho toy ny harena miafina. Hankeo amin’ny Soratra Masina amin’ny saina mietry sy mora ampianarina izy, mikatsaka sy hahalala ny fomba ahafahany mandeha amin’ny fahazavana , ary miteny hoe : « Tompo, inona no hataoko ? » Asa.9:6;22:10. Vonona ny hanao sorona ny zavatra rehetra, raha ilaina, mba hifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra izy.
Tsy resaka maivamaivana ny manolo-tena hankato ny sitrapon’Andriamanitra . Mitaky tsy fiovaovan’ny tanjona ny fidirana ao amin’ny vavahady ety sy ny fandehanana amin’ny lalan-tery izay mitondra ho any amin’ny toerana rehetra dia hisy feo manasa ny fanahy ho any amin’ny lalana tsy faleha sy voarara . Ireo izay tia harena sy voninahitra ary toerana ambony dia tsy hiditra amin’ny vavahady ety, raha tsy hoe mahafoy ny sampiny izy ireo. Tsy misy fomba hafa azo idirana amin’ny vavahdy ety ary hitondrana zavatra avy amin’izao tontolo izao.
Izay miditra amin’ny vavahady ety dia tsy maintsy manolo-tena tanteraka ho an’Andriamanitra. Hoy Jesôsy: “Raha misy olona ta hanaraka Ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy” Mat. 16:24